မြင့်သော အရှိန် တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > တခုတည်းသော ခေတ္တ Pneumatic Actuator > မြင့်သော အရှိန် တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator
တစ်ခု universal drive ကိုများအတွက်တီထွင်မှုနှင့်မူပိုင်ခွင့်ဖြေရှင်းနည်းများ ဝင်ရိုး
မည်သည့် application များအတွက်သင့်လျော်သောကျစ်လစ်သိပ်သည်းအိမ်ရာဒီဇိုင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်
operating မီဒီယာ: အပူပိုင်းသို့မဟုတ် lubricated လေ, non-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ရေနံ။
ခရီးသွားညှိနှိုင်းမှု: အများအတွက်± 4A °၏ညှိနှိုင်းမှုအကွာအဝေးရှိ 90Â°မှာလည်ပတ်
ချောဆီအရည်ကြည်: ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအခွအေနေအရ, မရနျလိုအပျ ချဲ့ချောဆီကို
ပေါင်းလိုက်သောကြိုတင်ထည့်သွင်းထား လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုနွေဦး / ကိုအလွယ်တကူနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာလျော့နည်းသွားတပ်ဆင်ထားသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်နိုင် လယ်ပြင်၌အသုံးပြုမှုအတွက်တပ်ဆင်သို့မဟုတ်ကာလအတွင်းကာလအတွင်း။
အဆိုပါလေကြောင်းထောက်ပံ့ရေး AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်၏ interface ကိုတစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator ဖြစ်ပါတယ် NUMAR စံနှင့်အညီတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ interface တွင် NUMAR solenoid valve မှ တိုက်ရိုက် install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
AOX-P ကိုအပေါငျးတို့သစွဲစေ စီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator စွန်ခံ၏ထားကြပါတယ် အချိန်ကြာမြင့်စွာချေးဖို့ခံနိုင်ရည်ဖြစ်သံမဏိ။
4 ။ ပစ္စတင်ထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်တောင်တော်အမွေးပေါ်တွင်အမြင့်တိကျစွာသွားများ တိကျမှန်ကန် positioning ကိုနိမ့်တန်ပြန်နှင့်အများဆုံးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရရှိလာတဲ့အတှကျရိုး ခြုံငုံအကျိုးရှိစွာစစ်ဆင်ရေး၌တည်၏။
1. ကျနော်တို့အနှစ် 20 ကျော်အဘို့ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ 1997 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့, ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းနှင့် AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်၏တစ်ခုတည်းသောသရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator ထုတ်လုပ် R & D ကိုအတွက်အထူးပြုနေကြသည်။
2. ကျွန်တော်တို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R & D ကိုအသင်းရှိစံဖှံ့ဖွိုးတိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ထုတ်ကုန် R & D ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအဆုံးအဖြတ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင်းကိုငါသိ၏။
3. ကျနော်တို့တင်းကြပ်စွာ AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်၏အရည်အသွေးတစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator ထိန်းချုပ်ဖို့ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာနှင့်မြင့်မားသောတိကျအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။
hot Tags:: မြင့်သော အရှိန် တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic rotary actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်